भारतीय नक्शा सम्बन्धी विवाद चाँडै समाधान होओस् | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २५ कार्तिक २०७६, सोमबार ०९:१८
खुला सीमानाका कारण भारत नेपाल बीच बेला बेला सीमा विवाद भइरहन्छ । लिपुलेकको उदाहरण पहिलो र एउटा मात्र होइन । सुस्ता तथा तराइका बिभिन्न जिल्लामा यस्ता समस्या बल्झिरहन्छ । राती सुत्दा नेपालमा सुतेकाहरु बिहान उठ्दा भारतीय भइसकेका उदाहरण पनि छन् ।
पछिल्लो नक्शाका कारण अहिले देशका सबै जिललामा आन्दोलन चलिरहेको छ । आन्दोलन एकपछि अर्को उग्र बन्दै गइरहेको छ । यदि यो क्रम लम्बिरह्यो भने अप्रिय घटना घट्ने सम्भावना टाढा छैन । केही दिनअघि मात्रै आन्दोलनको क्रममा सवारी साधन तोडफोड भएको हो ।
युवाजोशको कुनै बाँध, बन्देज हुदैन । अराजक बनाउनका लागि आन्दोलनमा घुसपैठ हुने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।
धमिलो पानीमा माछामार्न चाहनेहरु पनि यस्तो बेलामा निक्कै सल्बलाइरहेका हुन्छ । त्यसैले सरकाले कानमा तेल हालेर बस्नु हुदैन । कुटनीतिक पहल गरी यथासीघ्र सीमा विवाद मिलाउनु पर्छ ।
सीमा विवादकै कारण भारत–पाक युद्ध बेला बेला भइरहन्छ । केही समयअघि मात्र सीमा विवादकै कारण भारत र चिनियाँ सैनिक पनि संग्रामको मुखमै पुगेर अस्थायी समाधान भएको हो ।
त्यसैले यो मनन गरी सरकारले अप्रिय घटना हुनुअघि नै सबै खाले पहल गरी शान्तिपूर्वक समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।